laacib » Xaqiiqooyin U Gaar Ah Hogi Pyaar Ki Jeet Ee Daawashadiisa 20 Sano Kasoo Wareegatay
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Hogi Pyaar Ki Jeet Ee Daawashadiisa 20 Sano Kasoo Wareegatay
Hogi Pyaar Ki Jeet waa film jaceyl iyo dagaal isku dhexjirto ah sido kalena ay qaab jiliin ahaan aad ugu faro yareesteen Ajay Devgan iyo Arshad Warsi.
Mashruucan guul wacan ayuu gaaray marka laga fiiriyo ganacsiga uu sameyay, hadaba xaqiiqad filmkaan laga diiwaangaliyay halkaan hoose kaga bogo maadama maanta uu jirsaday `19 sano ayadoo la daawaday maanta oo kale 7 May 1999.
Xaqiiqada 1aad: Super Star Ajay Devgan mashruucan sameyntiisa kuma qanacsanen isagoo aan raali ka aheyn ayuu ku sameyay xushmad uu u haayo qarash gareeyasha filmka Anil Sharma iyo Indra Kumar.
Xaqiiqada 2aad: Ayub Khan ayaa markii hore saxiixday doorka Arshad Warsi ee filmka balse waa laga saaray Ayub mashruuca oo dhan sababo aan la garaneynin.
Xaqiiqada 3aad: Ayesha Jhulka ayaa filmkaan isaga baxday ayado markii hore saxiixatay doorka Neha hadana gadaal dambe weyba ka mashquushay sameynta filmka ayadoo isaga baxday.
Xaqiiqada 4aad: Atirishada Mayuri Kango doorkeda waxaa marki hore saxiixatay Mamta Kulkarni oo xiligaa xidig caan ah ahed balse Mamta ma sameynin oo waa laga saaray mashuucan Mamta ilaa hadana lama oga sababta.
Xaqiiqada 5aad: Intii la duubayey filmkaan waxaa magac ahaan loo bixiyay Kishan Balram balse markii duubistiisa la dhameyay ayee kooxda filmka isku afgarteen in loo bixiyo magaca Hogi Pyaar Ki Jeet.
Xaqiiqada 6aad: Shilpa Shetty ayaa saxiixatay doorka Shabana Raza ama Neha balse Ajay Devgan ayaa ka saaray waxuu umaleynaayey in ay Akshay Kumar guursaneyso waayo xiliyadaas guurkoda ayaa la hadal hayey maadama doorkas Ajay gabar shaashada kula mataleyso jaceyl ay ahe sida awged Ajay waqti inuu ka lumo ayuu diidana wuunaka saaray Shilpa isagoo Neha kusoo bedelay.
Xaqiiqada 7ad: Neha ama Shabana Raza sida u taqaanaba waa filmka kaliya ay shaashada jaceyl kula jishay atooraha Ajaya Devgan.
Xaqiiqada 8aad: Heesaha filmkana waxay noqdeen kuwa si heer sare ah u gadmeen guul wacana gaaren ilaa hadana waa heeso caan ah.